Afgambi ka dhacay Myanmar iyo madaxweynihii dalkaasi iyo madax kale oo “xabsiga” la dhigay – Calanka.com
Afgambi ka dhacay Myanmar iyo madaxweynihii dalkaasi iyo madax kale oo “xabsiga” la dhigay
in Dibedda — by admin —	February 1, 2021
Wararka ka imaanaya dalkaasi Myanmar ayaa waxaa ay sheegayaan in militariga dalkaasi ay xabsiga u taxaabeen madaxweynihii dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo madax kale.
Arintan ayaa imaaneysa xilli ay taagneyd xiisad u dhaxeysa dowladda shacabka ah ee dalkaasi iyo militariga, waxaana ay iminka xaqiijiyeen ciidamada in ay iyagu la wareegeen talada dalka.
Xisbiga NLD, ayaa kuraasta baarlamaanka dalkaas ka helay in ku filan, si uu u soo dhiso xukuumadda bisha November, balse ciidamada ayaa sheegay in codeyntaas ay ahayd mid la musuqmaasuqay.
Ciidanka ayaa dowladda ugu baaqay in ay dib u dhigto kalfadhiga baarlmaanka oo lagu waday in uu qabsoomo maalinta Isniinta.
Afahayeenka xisbiga NLD, Myo Nyunt, ayaa wakaaladda wararka ee Reuters khadka telefoonka ugu sheegay, in Ms Suu Kyi, madaxweyne Win Myint iyo hogaamiyeyaal kale la qabtay, aroornimadii hore ee saaka.
“Waxaan rabaa in aan dadkeena u sheego in aysan falcelin deg deg ah sameynin, waxaanna doonayaa in ay sharciga raacaan,” ayuu yiri, isagoona intaa ku daray, in uu filayo in isagana la xiri doono.
Wariyaha BBC-da uga soo warama Koonfur bari Aasiya, Jonathan Head, ayaa sheegaya, in askar lagu soo daadiyay wadooyinka caasimadda Naypyitaw, iyo magaalada weyn ee Yangon.
Qadadka telefoonka iyo Internetka magaalada Naypyitaw, ayaa go’an, sida uu ku soo waramayo wariyaha halkaas uga howlgala, BBC-da laanteeda Burmese.
Askarta, ayaa sidoo kale tagay guryaha madaxda wasiirada ee gobollo dhowr ah, iyagoona kaxeystay, sidaas waxaa yiri xubnaha qoyska.
Sabtidii, ciidamada qalabka sida ee Myanmar, ayaa balanqaaday in ay u hogaansamayaan dastuurka, iyadoo uu jiray walaac laga qabo inay isku diyaarinayeen in ay afgembi sameeyaan.
Sanadkii 1991, ayaa la siiyay abaalmarinta nabadda ee Nobel, xilligaasi oo ay xabsi guri ahayd, waxaana lagu sumtay awoodda dadka aan awooda lahayn.
Ms Suu Kyi, ayaa ku dhawaad 15-sano xabsi ku qaadatay intii u dhaxeysay sanadkii 1989 iyo 2010.